Ukuzibophezela Komphakathi - I-Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd.
I-SOSLLI ibamba "I-SOSLLI yenza umhlaba ube ngcono" umbono wokuzibophezela kwezenhlalo, isekele ngokuphelele izinqubomgomo kanye nemigomo ye-UN global compact, egxile kucebo kanye nasendimeni yamalungelo abantu, yabasebenzi, imvelo kanye nezinqubomgomo ezilwa nenkohlakalo eziyi-10, futhi ezisunguliwe igrafu engu- "6 yokufundisa" yokuzijwayeza ukuzibandakanya komphakathi, ithathe amakhasimende ngenkuthalo, abasebenzi, abalingani, abatshalizimali, imvelo kanye nesibopho somphakathi.
1. Intuthuko Esimeme
2.SOSLLI isimilo nokuhambisana
4. Isikweletu somkhiqizo
6. Ukuhlinzekwa komhlaba wonke
Izimiso Eziyishumi ze-UN Global Compact
Ukuqina kwezinkampani kuqala ngohlelo lwenkampani kanye nenqubo-esekelwe kwimigomo yokwenza ibhizinisi. Lokhu kusho ukusebenza ngezindlela ukuthi, okungenani, kuhlangatshezwe izibopho eziyisisekelo ezindaweni zamalungelo abantu, abasebenzi, imvelo kanye nokulwa nenkohlakalo. Amabhizinisi athembekile enza amanani afanayo nezinkambiso nomaphi lapho ekhona, futhi ayazi ukuthi imikhuba emihle endaweni eyodwa ayizukulimaza enye. Ngokufaka imigomo eyishumi ye-UN Global Compact kumasu, izinqubomgomo nezinqubo, nokusungula isiko lobuqotho, izinkampani azigcini ngokuqinisa izibopho zazo eziyisisekelo kubantu nakwiplanethi, kepha futhi zibeka isigaba sempumelelo yesikhathi eside.
Izimiso Eziyishumi ze-United Nations Global Compact zithathwe ku: Isimemezelo Somhlaba Wonke Samalungelo Abantu, iSimemezelo seNhlangano YezabaSebenzi Samazwe Ngamazwe Ngokwezimiso Eziyisisekelo kanye Namalungelo Emsebenzini, Isimemezelo se-Rio on Environmental and Development, kanye ne-United Nations Convention Against Corruption.
Isisekelo 1: Amabhizinisi kufanele asekele futhi ahloniphe ukuvikelwa kwamalungelo abantu okumenyezelwa emhlabeni jikelele; futhi
Isimiso 2: qiniseka ukuthi azihambisani nokuhlukumezeka kwamalungelo abantu.
Isisekelo 3: Amabhizinisi kufanele asekele inkululeko yokuzihlanganisa kanye nokuqashelwa okusebenzayo kwelungelo lokuxoxisana ngokuhlangana;
Umgomo 4: ukuqedwa kwazo zonke izinhlobo zomsebenzi ophoqelelwe kanye nowokuphoqelelwa;
Isimiso 5: Ukuqedwa okusebenzayo kokuqashwa kwezingane; futhi
Isimiso 6: ukuqedwa kokubandlululwa maqondana nomsebenzi nokuhlala.
Isisekelo 7: Amabhizinisi kufanele asekele indlela yokuvikela izinselelo zezemvelo;
Isisekelo 8: yenza imizamo yokuqhakambisa umthwalo wemfanelo omkhulu wemvelo; futhi
Isimiso 9: khuthaza ukuthuthukiswa kanye nokwanda kobuchwepheshe bemvelo obuyimvelo.
Isisekelo 10: Amabhizinisi kufanele asebenze ngokulwa nenkohlakalo ngazo zonke izinhlobo zawo, okubandakanya ukuphanga kanye nokufumbathisa.
Amaseli ebhethri weLithium Ion, Iphakethe lebhethri lamandla, I-20ah Lithium Ion Ibhethri, I-Power Lithium Battery Pack, Ibhethri Lithium Lamandla, Ibhethri le-3.6v Lithium-Ion,